umbuzo Las vegas unzip
iinyanga 1 kunyaka 7 eyadlulayo #769 by ukukhwela
Hayi, ukhupha i-LV kuma-PC ahlukeneyo ye-3 (i-4.05GB ipapashwe). Ukusebenzisa iWrarrar ihluleka ukukhupha iifayile ze6x.tiz kunye nefayile ye1x.exe. Kwimeko nganye ukuba i-archive ibonakele okanye iqulethe iintlobo zeefayile ezingaziwa. Ngaba enye ingubo ingaba yimpumelelo? Ukuba kunjalo, yiyiphi na, nceda?
iinyanga 1 kunyaka 7 eyadlulayo #770 by Dariussssss
Sawubona kwaye wamkele kwiRiooooo. Ngaba unakho ukuthumela oku ngaphantsi kwe-FSX, i-forum ye-FSX ye-Steam forum? Esi sihloko esithile sisetyenziselwa amalungu e-Rikoooo Forum ukuba azenzele.
iinyanga 1 kunyaka 7 eyadlulayo #772 by ukukhwela
iinyanga 1 kunyaka 7 eyadlulayo - iinyanga 1 kunyaka 7 eyadlulayo #773 by rikoooo
Ndiyifumene nale ngxaki nayo, ndayisombulula ngokusebenzisa i-Izarc:
Khuphela uze ufake i-freeware Izarc www.izarc.org/ koko nqakraza ngakwesokudla kwi-archive khetha "Izarc" kwaye "Khipha kwi-las_vegas_mega_photoreal_scenery"
Ngokuqinisekileyo ndim ulayishe i-archive entsha kwiRiooooo ngoko kwiiyure ezimbalwa iya kugqitywa kunoma ubani.
Uxolo ngenxa yokuphazamiseka, akulula ukujongana neefayile ezinkulu,
Uhlobo lokugqibela: 1 unyaka we-7 inyanga edlulileyo rikoooo.
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: ukukhwela